ကလိုစေးထူး: ညု လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
ညု လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း
စီဘောက်စ်မှာ `ကဲကဲ´ ဆိုတဲ့ တယောက် လာပြောသွားတာကို စိတ်ဆိုးရမယ့် အစား သဘောကျပြီး ရယ်တောင် ရယ်မိသေးတယ်။ ဘာတဲ့...၊ `ညုတုတုနဲ့ ရေးသလိုပေါ့၊ ဟဟ´ တဲ့...။ အမယ်...၊ ဟဟတောင် ပါလိုက်သေး။ :))
နောက်နေ့ကျတော့ အသစ်ထပ်တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတယောက် (နာမည်တော့ မဖော်တော့ပါဘူးလေ :P) က `ရေးထားတာ ကောင်းပါတယ်´ ...တဲ့။ အဟုတ်မှတ်ပြီး စိတ်ထဲ ကျေနပ်မလား ရှိသေး...၊ ဆက်ပြောလိုက်တာက ကြည့်ဦး...၊ `ညုတုတုလေးပေါ့...တဲ့´။
ဒါနဲ့ ပြန်စဉ်းစားတယ်။ သူတို့က ငါ့ကို ဘာကြောင့် ညုတယ် ပြောရပါလိမ့်ပေါ့။
သေချာတာကတော့ ဟို `ကဲကဲ´ ဆိုတဲ့ တယောက်က ကျနော့်ကို တော်တော် မေတ္တာတုံးနေတဲ့ လေသံနဲ့ပြောတာ...။ ကျနော်ရေးတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး ချက်နဲ့လက်နဲ့ ပြန်ပြောဖို့လဲ သိပ်စိတ်ရှည်ပုံ မရတာနဲ့ `ဒီကောင်တော့ ဒေါသထွက်ရော့လဟယ်´ ဆိုပြီး အားရပါးရ ချီးမြှင့်သွားတာ။
ဟိုဘော်ဒါကတော့ ဒီလိုဟုတ်ဟန် မတူဘူး။ သူ့ကြည့်ရတာ ဖတ်ပြီးတော့ တော်တော့်တော်တော်ကို လေးစားသွားပုံရတယ်။ (အကွက်ဝင်တုန်း အမှတ်ယူထားမှ :P ) ဒါနဲ့ မနာလို စိတ်အခံလေးကလဲ ရှိဟန်တူပါတယ်လေ။ ကျနော့်ကို ချီးကျူးသလိုလိုနဲ့ နှိပ်ကွပ်သွားတာလေ။ တကယ်ဆို သူလဲ ညုတာပဲဗျ။ :D
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ပြောတဲ့ `ညုတယ်´ ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ပြီး သာသာထိုးထိုးလေး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တော့ စာရေးတာ၊ စကားပြောတာမှာ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ တဘက်သားနားခံသာအောင် စိတ်ရှည်ရှည်ထား ရေးတာပြောတာကို ဆိုလိုချင်တာနဲ့ တူတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဆိုတော့လဲ ဂလောက်တော့ သားသားနားနားလေး ပြောဦးမှ...။
တကယ်တော့ ကျနော်က စိတ်သိပ်ရှည်တတ်တဲ့ လူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါသကြီးလွယ်၊ စိတ်တိုလွယ်သလောက် စိတ်ပြေလဲ လွယ်တဲ့ လူတမျိုးထဲမှာ ကျနော်ပါတယ်။ ဒေါသလွယ်မိလို့ မှားခဲ့တာတွေလဲ သောင်းခြောက်ထောင်ပဲ။
ကျနော် အွန်လိုင်းပေါ် စတက်တော့ modins ဆိုတဲ့ ချက်ရွမ်းကို ခဏခဏ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီChatမှာက ဘာအကောင့်မှ လုပ်စရာလဲ မလိုဘူး။ ချက်ချင်တဲ့အခါကျရင် နစ်ခ်နိမ်း တခု အလွယ်တကူပေးပြီးတော့ ၀င်ချက်ရုံပဲ။ အဲဒါနဲ့ ချက်ပါလေရော ဆိုပါတော့...။
ခက်တာက တခါတခါကျရင် ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ နစ်ခ်တွေနဲ့ တချို့လူတွေက ပေါက်ကရလေးဆယ်တွေ ၀င်ပြောပြီး ရန်တွေ လျှောက်စတာပဲ။ ရန်စရင်းနဲ့ ပိုပြီးအားပါလာတော့ ရန်ဖြစ်တာပေါ့။ ကျနော်လား...၊ ဘယ်နေမလဲလေ တချီတမောင်း ဖြစ်လိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့ အထဲကပဲ။ သူတို့ချည်းပဲ စိတ်ရှိတာမှ မဟုတ်တာ ငါလဲ စိတ်နဲ့ပဲ ဒေါသထွက်တတ်တယ်ကွပေါ့။
ဒါပေမယ့် တရက်ကျတော့ အဲဒီ ချက်ထဲမှာ တချိန်လုံးထိုင်ဆဲနေလို့ လူတွေလဲ တော်တော် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ တယောက်ကို ကျနော် ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ စကားတခွန်းပြောလိုက်မိတယ်။ `ကျနော်တို့က အလုပ်နားတဲ့ အချိန်လေး ချက်ရတာမို့ အဲဒီလို မဆဲဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ´...လို့။ (ညုတာ၊ ညုတာ) ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်ချောက အဆဲရပ်သွားပါလေရော...။ အမယ်၊ သူ ပြန်ထွက်ခါနီး ကျနော့်ကိုတောင် ပြောသွားလိုက်သေးတယ်။ `အကို့ကို အားနာလို့ နောက်ဆိုရင် အကိုရှိနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မဆဲတော့ဘူးဗျာ´ တဲ့...။
နောက်တော့ ကျနော် မြန်မာချက် မှာ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ချက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခု ဘလော့ဂ်လောကမှာ လက်စွမ်းပြနေတဲ့ လင်းလက်ကြယ်စင် ဆိုတာ မြန်မာချက်ထဲမှာတုန်းက ကျနော်နဲ့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် မောင်နှမတွေပေါ့။
အဲဒီချက်မှာတုန်းက ကျနော့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တခု ပြောပြရဦးမယ်။ အဲဒါကတော့ ခဏခဏ ရန်ဖြစ်တာပဲ။ စိတ်အခန့်မသင့်လဲ ရန်ဖြစ်၊ ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လဲ ရန်ဖြစ်နဲ့ ထီခနဲဆို ရန်ဖြစ်တာ ဘယ်သူလဲ မေးလိုက်ရင် ကျနော်ချည်းပဲဖြစ်နေတာ များတယ်။ :D
အထူးသဖြင့် အဲဒီမှာတုန်းက ကျနော် စနစ်တကျနဲ့ ရန်သွားသွားစပြီး ရန်ဖြစ်တာက စစ်တပ်ဘက်က လူတွေကို များတယ်။ သူ့ဘာသာသူ အေးဆေးချက်နေရင်တောင် စစ်တပ်ကမှန်း သိနေရင် ကျနော်က မထိတထိ သွားရန်စပြီးတော့ကို ရန်ဖြစ်တာ။ ဟိုကလဲ စိတ်နဲ့ပဲ၊ ဘယ်ခံမလဲ၊ အဲဒါနဲ့ ချကြလေသတည်းပေါ့။ အဲဒီတုန်းကတော့ အဲလို စစ်တပ်ကလူတွေကို ရန်စပြီး ကိုယ်ပြောချင်တာ သွားသွားပြောနေရတာကိုပဲ ကျေနပ်နေလိုက်သေးတယ်။
ဘလော့ဂ် တခုကို စရေးတော့မယ် ဆိုတော့ ကျနော်ရေးချင်တဲ့ပုံစံ၊ ကျနော်ရေးချင်တဲ့ စာတွေက ရန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကို အလိုလိုက်လို့ မရတော့ဘူး။ နောက်ပြီး ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး။ ကျနော်က စာရေးရင် စိတ်ကို တော်တော်လေး ဆွဲဆန့်ထားနိုင်တယ်။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေကို ကိုယ်ခံယူထားတဲ့ ခံယူချက်ကို သူ့ဘက်ကလဲ နားလည်ပေးနိုင်အောင် ရေးရတာကို ပိုပြီး သဘောတွေ့လာတယ်။ ဘယ်လိုမှကို ရှင်းပြလို့ မရတဲ့ လူတမျိုးကျတော့လဲ လစ်လျူရှုထားရတာပေါ့။
ကျနော် စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ကျနော်တို့ စကားတခွန်းကို ပြောမယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီ စကားက အမှန်တော့ စေတနာစကားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လေသံမတူတဲ့ ပုံစံနှစ်မျိုးပေါ့။ ကျနော် ဥပမာ ပြောကြည့်ပါမယ်။
`ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲကွ၊ သောက်သုံးကို မကျဘူး၊ မင်း ဒီတိုင်းသာ ဆက်သွားနေရင် ခွေးလောက်တောင် ပြောင်ရောင်မှာ မဟုတ်ဘူး´
အဲဒီ စကားက တကယ်လဲ စေတနာပါနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အပြောခံရသူကို နားဝင်စေဖို့ကတော့ ကျနော်ထင်တယ်၊ ၃၀% လောက်ပဲ ရှိနိုင်မယ်။ ဒါတောင် သူ့ကို ပြောနေတဲ့လူရဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကို အပြောခံရသူက နားလည်နှင့်ပြီး ဖြစ်နေဦးမှ...။
`ဒီလိုတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တယ်ဗျာ၊ ကျနော်က ခင်ဗျား ဒုက္ခဖြစ်မှာကိုတော မမြင်ချင်ဘူးလေ။ ခင်ဗျားလဲ လူညံ့တယောက် မဟုတ်ပါဘူး´
ဆိုလိုရင်းသည် ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထိရောက်မှုခြင်းကျတော့ အပေါ်က စကားထက် ငါးဆလောက် ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ တဘက်သားကို နားဝင်စေလိမ့်မှာပါ။
`အပြောချိုပေမယ့် မနောမချိုရင်တော့ အလကားပေါ့´ လို့ လူတွေပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါအတွက်ကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ မူရင်းပင်ကို စိတ်ဓာတ်က တကယ်ပဲ ယုတ်ညံ့နေရင် အပြောချိုပြနေလဲ ခဏပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မူရင်းပင်ကိုယ်စိတ်က ကောင်းပါလျက်နဲ့ အပြောအဆို ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတာကြောင့် တကယ့်စေတနာက ဝေဒနာတွေ ဖြစ်သွားတာတွေဟာ အများကြီးပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို သေသေချာချာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တဘက်သားနားဝင်လာအောင် ပြောရတာကို အရင်တုန်းက ရန်ခဏခဏ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အရသာထက် ကျနော်ပိုကြိုက်တယ်။ တကယ်ဆိုရင် `နှုတ်ချို သျှိုတပါး´ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တောင် ရှိသေးတာပဲ။
ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကို တဘက်သားနားလည်အောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြလို့ ဟိုဘက်က နားလည်လက်ခံသွားတဲ့အခါ အဲဒီအရသာကို ပြန်ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာနဲ့မှ မတူတဲ့ ပီတိတမျိုးကို ခံစားရမှာ အသေအချာပါပဲ။
အဲဒီလို အခါမျိုးကျရင် `ညုတုတုနဲ့´ လို့ တယောက်ယောက်က ကျီစယ်လာရင် ပိုလို့တောင် သဘောကျမိနေဦးမှာ...။ ဒီတော့...။
ပြေလည်ရာ ပြေလည်ကြောင်း အကျိုးအသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြတာကို ညုတယ်လို့ သတ်မှတ်ရင်တော့လား...။
လာလေ...၊ပျော်ပျော်ကြီး ညု ကြတာပေါ့။
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:31 PM
Sep 12, 2008, 11:01:00 PM
အကြောင်းအရာတစ်ခု ( သို့ ) ပြဿနာတစ်ခု ကို
တဖက်သားနားလည်အောင် နဲ့ အကျိုးအသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြတာ ကို ညုတယ်လို့် ကျွန်တော်
ကျွန်တော် ခုမှ Comment ရေးဘူးတာပါ။
Sep 12, 2008, 11:21:00 PM
ဒီအစ်ကိုကြီးဆီမှာ ညုခြင်းအတက်ပညာတွေလာသင်မှပဲ သင်ပေးမလားး :P
Sep 12, 2008, 11:31:00 PM
Sep 13, 2008, 12:02:00 AM
ဟားဟား..ကောင်းရော။ ကိုစေးထူးကို အဲလိုချက်ကျလက်ကျ ပြောနိုင်တာတွေ သဘောကျတယ်။ အမယ် ..ကြုံတုန်းပြောရဦးမယ်။ ညီမ စီဘောက်စ်မှာ လာအော်တဲ့သူနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်မို့..ဘာတဲ့ “ကလူ ကလူ ကိုဖြစ်နေမှာပဲ” တဲ့။ အော်..ကလူတာတွေ ညုတာတွေ...တရားကျစရာပဲ။
Sep 13, 2008, 12:07:00 AM
`အိုကွယ်.....ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ...လို့၊ ဟွန့်....သောက်သုံးကို မကျဘူးလေးရယ်တဲ့မှ..... အို....မကျဘူးကွယ်၊ မင်းကလေးသာ ဒီတိုင်းသာ ဆက်သွားနေရင် “ခွေးခွေးလေး”လောက်တောင် ပြောင်ရောင်မှာ မဟုတ်ဘူးကွယ်....ဟင့်´
Sep 13, 2008, 12:48:00 AM
i agree with 'skyblue'.
ha ha u don't know what the meaning of 'nyut'.
This is my first time of writing comments in ur blog
Sep 13, 2008, 1:53:00 AM
skyblue ကျနော်လဲ အဲဒီလို မယူဆလို့ ဒါကိုပဲ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြောနေတာကို ညုတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် ညုကြပါစို့လားလို့ ရေးလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ညုတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာတော့ သိပါတယ်။ :) skyblue ရေးတာ အမှားမပါပါဘူး။ ကျနော် ရေးတာ လိုတာနေမှာပါ။
Sep 13, 2008, 1:57:00 AM
it does not mean that 'nyut' if u try to explain or mention ur opinion to the other person foraspecific things oraspecific problem.
So poor.... u don't exactly know the myanmar words(myanmar sar)..
may be u don't know how to write 'myanmar essay'. Try to read more myanmar article. Ortherwise u can't becomeagood writer/notagood blogger.
Everyone can do blogging if he/she knows google /internet usage/web/IT knowledge. But everyone is not able to beagood 'myanmar writer'.. This is my first time writing comments in ur blog although i seldom visit ur blog. Todayalot of myanmar bloggers are come out just forafan or some other reasons (i'm not sure why they do blogging) but i enjoy blog reading as i can get some knowledge (general or other). Among all of them, i prefer only 'May Nyein', 'KoPaw07' , 'emotionalcorner.lanolay.com'
. They areagood writers whatever they wish to write. so all burmese bloggers should learn 'myanmar sar ' properly. Some are still wrong in very basic myanmar grammar.
Sep 13, 2008, 2:08:00 AM
anynomous နဲ့ skyblueရေ။ အဲဒီအပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီးပြန်ေ၇းကြတာထင်တယ်။ ကလိုစေးထူးက အဲဒါကို စာသွက်အောင်ေ၇းတာလို့ပဲ ကျတော်တော့မြင်တယ်။ ညုတယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိတာပဲဗျ။ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ပီး သာသာထိုးထိုးလေး လို့ေ၇းသွားတာကို သတိထားမိမယ်ဆို၇င် တွေ့မှာပါ။ တပုဒ်လုံးကို သေချာဖတ်၇င် သူပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့က အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ေ၇းတာဟာ ညုတယ် လို့ခေါ်ရင် ညုလိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်းလို့ေ၇းတာလို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။
Sep 13, 2008, 2:13:00 AM
ကြိုက်တယ်ဗျာ။ အမည်မဲ့ ကျနော့်ကို ဝေဖန်သွားတာ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ AGT အစီအစဉ်မှာ Piers က ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန်တာနဲ့ တူတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကြိုက်ပါတယ်။
ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံး လာရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်မှာ ကျနော်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်က ဒီလိုကြီး ဖြစ်နေတာကိုတော့ ကျနော့် ညံ့ဖျင်းမှုလို့ပဲ ပြောရမှာပဲပေါ့။ ကြိုးစားပါဦးမယ်။ ကျေးဇူးပဲ။
ကျနော် ဒီပို့စ်မှာ ညုတယ် ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာဟာ အပေါ်က `ကိုမြတ်သူ´ ပြောသွားသလိုပါပဲ။
ညုတယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ မြန်မာ Slang စကားတမျိုးပါ။ စာကြီးပေကြီးတွေနဲ့ ထုတ်နှုတ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုနေရမယ့် စကားလုံးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က ဒီစကားလုံးလေးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ပဲ ကျနော်ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ကို ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီး ဒီလို ရေးလိုက်တာပါ။
လူတယောက်က ကျနော့်စီဘောက်စ်မှာ ကျနော့်ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပက်ပက်စက်စက် ပြောသွားတယ်။ အဲဒီလိုပြောသွားတာတဲ့ အထဲမှာ ညုတယ် ဆိုတဲ့ စကားလဲ ပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်က တမျိုး ပြန်ခံစားပြီး ရေးကြည့်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဒါနဲ့ အမည်မဲ့ရဲ့ ကွန်မန့်က ကျနော်က ညုတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲနေတာကို ထောက်ပြချင်တာထက် ကျနော့်ကို တီးချင်တာက ပိုများနေသလားလို့။ :))
Sep 13, 2008, 2:28:00 AM
Dear Ko Sayhtoo,
I know what you mean about 'nyue' and I understand what are you trying to explain. I am one of your fan for almostayear. Sometimes, you don't need to take care about some people who are finding when will you make mistakes and make insults to you. You just need to create by your self. Keep going buddy! Everybody know that you areagood writer/blogger or not.
Sep 13, 2008, 2:52:00 AM
To Mr or Ms Anonymous
First, you need to mind your own writing. I don't know whether you can type in burmese or not. But what you wrote has some errors. Generally, it is no need to point out such trivial errors but in ur case, you are lecturing the Blogger about language and grammer. :P
ညုတယ် ...လူတိုင်းလွယ်လွယ်လေးနားလည်တဲ့ စကား..။ ဒါကိုသုံးပီး ကိုစေးထူးက မက်ဆေ့တစ်ခုပေးတယ်..။ အခြားသူတွေ အဲဒီမက်ဆေ့ကို ရတယ်။ ကို၊မ အမည်မသိကလွဲရင်ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ စာရေးသူ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ကိုယူတတ်နိုင်လောက်တဲ့ ၀မ်းစာ အရင်ဖြည့်ပီးမှ လာပြောရင် ပိုကောင်းမယ်ဗျာ..။
Sep 13, 2008, 7:34:00 AM
ok, so so sorry. Yes, correct. there is some error in my writhing. i know it. anyway, i just want to point out something for the sake of all burmese bloggers. First, you also need to mind ur own burmese words, "ဒါကိုသုံးပီး " ha ha , it's wrong.
"အရင်ဖြည့်ပီးမှ " ha ha, wrong. not 'pee'.
We all are burmese/myanmar. we all should write correct usage or words or spelling or grammar.
Yes, i admitted it. my english is not as nice as you because i m still student.and english is our second language. It is not easy to get excellent skill in writing,reading,listening n speaking. It is not our mother tongue.
But we should not use wrong usage/words in our own language even though we are not excellent in literature .
Yes, i see. this blogger is not bad one. but i just want to say this comments for the sake of him. it's not for you. ha ha.....
I WILL NOT IMPRESS SOMEONE IF HE/SHE IS NOT ABLE TO USE CORRECT USAGE IN OUR BELOVED MYANMAR LANGUAGE. BYE BYE..
I have no time to fight suchaclever person. :)
Sep 13, 2008, 8:52:00 AM
Ko Sayhtoo yay,
bye bye nor. i'll not definitely visit to ur blog next time. wowww.... so complicated society ....
try to promote ur blogging... first comment writing... i got first fight from another reader.. /ha ha not from blogger/ ha ha ... bye . i'll return to my studying... will not never writing comments to ur blog... there arealot of ur fan... /one-sided reader/ i don't want to waste suchasmall small case.... but so poor for everyone who doesn't know correctly about myanmar language especially spelling, grammar,..... bye for the whole life... :)
Sep 13, 2008, 9:07:00 AM
ကျနော်ထင်တယ်။ သူတို့ကရော ကျနော်ကရော ဘယ်သူကမှ ပြန်ပြီး fighting ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြန်ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို လာလည်ပြီးမှ အခုလို ဖြစ်သွားတာကိုတော့ ကျနော်လဲ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ တခုတော့ ပြောခွင့်ပြုပါ။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ဆီကို လာလည်တဲ့လူကို ဧည့်ဝတ်မကျေတဲ့ ပုံစံ ပြန်မပြောမိအောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်က အချိန်ဖြုန်းသလို ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ ဆောရီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြောတာဆိုတာကို ကျနော့်ကိုပဲ တိုက်ရိုက် (ကြိုက်သလောက်သာ ကဲ့ရဲ့) ပြောပါ။ မိတ်ဆွေ မကြိုက်ပေမယ့် ကြိုက်တဲ့တခြားလူတွေကိုတော့ စော်ကားရာမရောက်အောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။ ဒါကိုလဲ ပြန်တိုက်ခိုက်တယ် မှတ်ယူမလားတော့ မသိဘူး။
ပြီးတော့ ကျနော် သတိထားမိသလောက်က မိတ်ဆွေက ကိုယ်ကသာ တဘက်သားကို အားမနာစတမ်း ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ပြောလိုက်မယ်။ တဘက်က ပြန်တုံ့ပြန်လာရင်တော့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းရမ်းချင်ပုံရတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပါ။ ရပါတယ်။ ကျနော့်စာကို လူတိုင်းက ကြိုက်နေမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားဘူး။ အဝေဖန်မခံနိုင်ရင် ဒီလောက်အထိတောင် ကျနော် ဘလော့ဂ် ရေးလာဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် ဘလော့ဂ်တခုကို မကြိုက်တာနဲ့ပဲ တခြားဘလော့ဂ်ရေးသူတွေနဲ့ ဖတ်သူတွေကို သိမ်းမရမ်းပါနဲ့။
Sep 13, 2008, 12:31:00 PM
ကျွန်တော်လည်း စာများများ မရေးဘူးလို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ
anonymous ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ နည်းနည်း ဆွေးနွေးချင်လို့ပါဗျာ
fight လို့ ပြောရအောင် ဒီထဲမှာရန်ဖြစ်နေတာ တစ်ခုမှ မပါ ပါဘူးဗျာ။ လူတိုင်းက အေးအေး ဆေးဆေး ပြောနေတာပါပဲ အဲ့ဒါကြောင့် ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ "discuss" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြောင်းသုံးရင် ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ.
ပြီးတော့ "so poor for everyone who doesn't know correctly about myanmar language especially spelling, grammar,..... " မြန်မာလို စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံနှင့် သဒ္ဒါ မတတ်တဲ့လူတွေက သနားတယ် အထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောထားတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်...
အဲ့လို ပြောရအောင် မသိ မတတ်တဲ့လူက သင်ပေးလိုက်ရင် တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ... အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ဆီမှာ မြန်မာစာကို အသုံးချလိုစိတ်ရှိသေးတယ်...ဒီအချက်ဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ အပေါ်ကရေးထားတဲ့ မိတ်ဆွေက မြန်မာလိုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ပြီး (ယူဆရတာပဲ) commentsတွေကို englishလိုရေးထားတာကိုကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာစာကို လုံးဝ အသုံးမချဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်... ဒီလိုလူတွေ များလာရင် မြန်မာစာကြီး တိမ်ကော ပျောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်... အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ပြောချင်တာက မြန်မာလို ကောင်းကောင်း မတတ်တဲ့လူကို အပြစ်ပြောမည့် အစား အမှားကို ပြင်ပေးလိုက်တာ ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ... မိတ်ဆွေကိုလဲ အကြံပြုချင်တာကတော့ မြန်မာစာကို တတ်နုိုင်သလောက် အသုံးချပေးပါ။ မြန်မာစာပေကြီး အဓွန့်ရှည်စေဖို့အတွက်ပါ။
ပြီးတော့ "ဘလော့ရေးချင်ရင် စာများများ ဖတ်" လို့ ပြောထားတဲ့ အချက်လေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ စာ တကယ် များများ ဖတ်ဖူးတဲ့ လူတိုင်းဟာ ဒီpost ကို ဖတ်ပြီးရင် စာရေးသူ ဘာကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးလဲ ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူဟာ "ညု" တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ meaning ကို မသိဘဲ ဒီစာကို ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အပေါ်က commentsတွေကို ကြည့်မယ်ဆုိုရင်လည်း ဒီအချက်ဟာ သိသာလွန်းနေပါတယ်ဗျာ... ဒီလို style မျိုးကို ဘုန်းဘုန်းရှင်ဆေကိန တို့လဲ မကြာခဏရေးတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် တစ်မျိုး ထင်ရပေမယ့် စာကို တကယ် ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါ စာရေးသူ ဘာပြောချင်လဲဆိုတာ ထင်းခနဲ ပေါ်လာပါတယ်.. ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေလဲ သူများကို အပြစ်မပြောခင်လေး စာရေးသူ ဘယ်လို styleနဲ့ ရေးထားတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်အောင် မြန်မာစာ ဗဟုသုတလေးများ လိုက်လံဖတ်ရှုကြည့်ပါဦး အကြံပေးပါရစေ
ဟိုက် ကျွန်တော်ရေးတာ တော်တော်တောင်ရှည်နေပြီပဲ. ခုမှပဲ talkyboyဆိုတဲ့ nick နဲ့ လိုက်သွားတော့တယ် :P
နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာလေးတော့ ခွင့်ပြုပါဦး :D
မိတ်ဆွေ ရေးထားတဲ့ "နောက် ဒီsiteကို ဘယ်တော့မှ မလာတော့ပါဘူး" ဆိုတာကို မယုံနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ.. ခုဆုိုရင်တောင်မှ မိတ်ဆွေရဲ့ commentကို ကိုစေးထူးနဲ့ တခြားလူတွေ ဘယ်လို reply လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ လာကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့် commentလေးကို တွေ့ရင် တွေ့နေလောက်ပါပြီ
ကျွန်တော့် အထင်မှားခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော့် အမှားကို ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်ဗျာ ;D
ဒီလောက်ပါပဲ ဖတ်တဲ့လူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အားလုံး စိတ်ကော ကိုယ်ပါ ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ
Sep 13, 2008, 6:02:00 PM
"အခု ဘလော့ဂ်လောကမှာ လက်စွမ်းပြနေတဲ့ လင်းလက်ကြယ်စင် ဆိုတာ မြန်မာချက်ထဲမှာတုန်းက ကျနော်နဲ့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် မောင်နှမတွေပေါ့။"
>>> ဗုဒ္ဓေါ .. ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ အကုန်ပြန်ဖော်နေတာလား အကိုရ :D ။ အရင်လို မဆိုးတော့တာလည်း ဘလော့ခ်မရေးခင်ကတည်းကပါ :P။ တခါတလေတော့ မောင်နှမတွေအားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ နှုတ်ဆက်စကားပြော ၊ ရန်ဖြစ် ၊ ပြန်တည့်ခဲ့ချိန်လေးတွေကို သတိရသား :)
Sep 14, 2008, 10:14:00 AM
ကိုစေးထူး… ညှတယ်ဆိုဆို ခရာတယ်ပြောပြော…့ ပြောချင်တာကို ရောက်အောင် ပြောသွားနိုင်တာကိုက ပညာပေါ့…
Sep 14, 2008, 11:40:00 PM
Sep 15, 2008, 9:57:00 PM
သူ့ညနေ နဲ့ ကျနော့်ညနေ
၄၀၀ ...နဲ့ ၂ နှစ်